Laptop တလုံး၀ယ်လိုသည်။ - MYSTERY ZILLION
December 2009 edited December 2009 in Laptops & Notebooks Sale
100,000နှင့်150,000 ကြားလက်တော့ used သို့ netbook used တလုံး၀ယ်လိုသည်။Battery အတန်အသင့်ကောင်း ရမည်။WLan ပါလျှင်ပိုအဆင်ပြေသည်။ရောင်းလိုသူများရှိလျှင် ကျနော်ဆီဆက်သွယ်ပေး ကျပါ။:D
ကိုပြည့်ဖြိုးအောင်ရေ...... အခု တပ်မတော်ခန်းမမှာ လုပ်နေတဲ့ Nibban က ပွဲလေးမျာ Laptop တွေလည်း ရောင်းပါတယ် Use ရော့ Brand New တွေ လည်းပါပါတယ်။ တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ပါလား ကျွန်တော်တော့ သက်သာတယ် ထင်တာပဲ.......
ကိုစိုင်းရေ ကျနော်၀ယ်နိုင်တဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ အဲဒီမှာရပါ့မလား။သူတို့က ကစ်တယ်နောိ။လောလောဆယ် laptop ကမဖြစ်မနေလိုနေလို့
ကျွန်တော်လည်းလိုချင်တယ်ဗျ။ အခု DoDoKoKo မှာရောင်းနေတာ Asus Laptops brand news တဲ့
CPU - Mobile Celeron 1.4 GHz (Mobile Processor နော်)
Memory - 1 GB (DDR 1 ထင်တာပဲ)
HD -40 GB တဲ့ (IDE ပါတဲ့)
VGA - 128
ROM -DVD Combo
WLan,Lan,IEEE ပါတယ်လို့ပြောတယ်။ Battery ကတော့ ၂ နာရီကျော်ခံတယ်တဲ့
DoDoKoKo ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ပထမတစ်ရစ်ကို ၁၅၀၀၀၀ တဲ့ ဒုတိယတစ်ရစ်ကို ၇၅၀၀၀ တဲ့ တတိယတစ်ရစ်ကို လည်း ၇၅၀၀၀ တဲ့။
if you are mandalay.
come to me, i have alot of p3-p4 laptop (used)
i can sell to you between 100000-150000.
ကျွန်တော် ဟိုတစ်ခါ Laptop ရောင်းဖို့ တင်သေးတယ်လေ
အခု အဲဒါမျိုး နောက်တစ်လုံး ရောက်ဖို့ရှိသေးတယ်ဗျ (သိပ်တော့မသေချာသေးဘူး)။ သူတို့က ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် ဆိုတော့ ပုံစံတူ နှစ်လုံးဝယ်ထားတာလေ။ သူတို့ ပထမ အလုံး ရောင်းပြီးတော့ မှ စျေးသွားစုံစမ်းတော့ အဲဒါမျိုးကို ၂ သိန်း ကျော် တန်မှန်းသိ သွားတယ်ဗျ။ အခုကျွန်တော့ကို ရောင်းပေးဖို့ပြောနေပြန်ပြီ။ စျေးက ၂ သိန်းရမှတဲ့ Laptop ကိုတော့မမြင်ရသေးဘူး၊ ပထမ အလုံးနဲ့ အတူတူပဲတဲ့။ သေချာသိရရင် ပြောမယ်နော်။
နှစ်သိန်းလဲ တန်တာပဲဗျ .. ညီ ဟိုတခါပြောသလို ပဲ ဘက်ထရီလဲ ကောင်းသေးတယ်ဆိုရင် အိုကေတာပဲလေ .. ကဲ ခုလောက်ဆို ကိုစိုင်းလဲ သိလောက်ပြီ ဘယ့်နှာလုပ်ရပါ့ ညီ သေချာရင် အစ်ကို pm ထပ်ပို့လိုက်မယ်:D
ဟုတ်ကဲ့ Laptop ကကျွန်တော့လက်ထဲကို မရောက်သေးပါဘူး။
ရောက်တာနဲ့ ပြောပါ့မယ် နော်။
ဟုတ်ကဲ့ Netbook ထဲက MSI u100,prolink,Viewsonic တို့ ကောရောင်းမယ့်လူများ မရှိကျဘူးလား။တကယ်လိုချင်တာက Notebook ကျနော် တကယ်လိုနေတာ။အရင် ကAcer 4315လေးရှိနေတာ အဆင်ပြေလို့ ခုကျကွဲသွားလို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေလို့ပါ။ကူညီကြပါ
ကဲ ခုလောက်ဆို ကိုစိုင်းလဲ သိလောက်ပြီ ဘယ့်နှာလုပ်ရပါ့ ညီ သေချာရင် အစ်ကို pm ထပ်ပို့လိုက်မယ်:d
ကိုအီမို ဘယ်နားနေလဲဗျ......... အပြေးပြိုင်သလို တာထွက်ကို ကြိုကြည့်ထားတာ......... ဟီးဟီး.... :d:d